Semalt: Okubalulekile Ukungaxhunyiwe Wonke Amakheli E-IP Angaphandle
Kungokwemvelo ukuphutha. Yingakho kusobala ukuthi ezinye izinto kudingeka zenziwe ngokushesha kunokuba zize kamuva, zisalokhu zihlehlisiwe. Ngamanye amazwi, ukuchitha isikhathi kuzuza njalo. Ukungaxhunyiwe wonke amakheli e-IP wangaphandle kubalulekile ikakhulukazi uma ubhekene nebhulogi yokuqalisa noma iwebhusayithi. Uma ufisa uhlelo olubushelelezi nolunembile, lokhu akufanele kunganakwa. Konke okufanayo, kunamabhodlela amabili. Okokuqala, le mininingwane yemigwaqo ebalulekile idatha njengenombolo yokubukwa kwekhasi nesikhathi esichithwe ekhasini lewebhu. Okwesibili, kunciphisa izinga lokunciphisa ngenkathi kukhuliswa imvamisa yokubuya kwabasebenzisi (abasebenzisi).
Njengoba abaphathi bewebhu basebenzisa lolu datha ukuze kuhlaziywe futhi kuthuthukiswe, kunesidingo sokuba ungavumeli ikheli lakho le-IP. Noma yini ephikisana nalokhu ichaza ukubhujiswa kwikhono lakho lokubamba ulwazi olubalulekile - kusukela kuma-analytics.
Nansi umhlahlandlela kaFrank Abagnale, umphathi we-15 (Semalt weNtuthuko yoMthengi, indlela yokukhipha ikheli le-IP kusuka ku-Google Analytics.
Isinyathelo sokuqala: thola ikheli lakho le-IP
Lesi sinyathelo kunalokho siqondile, futhi i-Google ikhona ukuze isize. Vele uthayiphe Kuyini ikheli lami le-IP. Imizuzwana imiiphumela izovela, futhi ngaphezulu kwemiphumela, uzobona I-IP.
Isinyathelo sesibili: hamba ezihlungi
Kulokhu kufanele wenze lokhu okulandelayo:
Yiya ku-Google Analytics bese ungena ku-akhawunti yakho. Uma usungene ngemvume, kufanele ukwazi ukubona ikhaya le-Akhawunti.
chofoza ithegi 'Admin' endaweni ethile phezulu kwimenyu yokuhamba. Lokhu kuzokuqondisa kwenye iskrini
ngemuva kwesinyathelo esingenhla, khetha i-akhawunti ngaphansi kwesizinda sakho esikuyo
khetha futhi ukhethe isizinda (impahla) ongathanda ukuyibeka ngaphandle kokubikwa kwe-analytics yakho.
khetha eyodwa yamathebhu okuhlungiwe okufakwe ohlwini bese udala eyodwa (engeza isihlungi esisha).
Isinyathelo sesithathu: ukusebenzisa isihlungi
Ukucabanga ukuthi awukwenzi lokhu ngaphambi kwalokho bese uqaphela okulandelayo:
yakha isihlungi esisha kuphrofayela
cabanga ngokuhlukile kodwa kulula ukukhumbula igama lesihlungi. Zama okuthile njenge-IP yami evinjelwe
ukhethe isihlungi esinqunyiwe ngaphambili bese uqhubeka isinyathelo esilandelayo
wenze izinguquko kwimenyu yehla yehla efana nokuthi ifunda 'ithrafikhi kusuka ekheli le-IP.'
ukhiye ekhelini lakho le-IP njengoba uthola njengoba kuboniswe ekuqaleni kwalesi siqondiso.
Kulula lokho. Njengoba manje unakekele lokhu, unelungelo lokungena ngewebusayithi yakho ngaphandle kokuba ukhathazeke nganoma yini ephazamisa umbiko wakho we-Analytics / idatha. Kuthiwani ngokulula kwakho? Amanani okukhipha ikheli le-IP kusuka ku-Google Analytics ilula futhi ayidingi ukuba ube yi-guru lobuchwepheshe. Vele ulandele izinyathelo ezibalwe, futhi usuqedile:
Isinyathelo esisodwa - vumela i-Google ikusize ubone i-IP yakho eyingqayizivele
Isinyathelo ezimbili - hamba ngokusebenzisa imenyu ye-akhawunti bese udala isihlungi esingokwezifiso
Isinyathelo ezintathu - hlela isihlungi esingokwezifiso ukukhipha i-IP yakho bese ulondoloza zonke izinguquko.